Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Bevitine (ဘီဗစ်တင်း)
Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Bevitine ကိုအစားအစာများမှ VitaminB1 ဓါတ်ကိုလုံလောက်စွာမရရှိသူများ တွင် Vitamin B1 ချို့တဲ့ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။
Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အစာနှင့် တွဲ၍ဖြစ်စေ၊ အစာမရှိဘဲဖြစ်စေ တနေ့ကို ၁ကြိမ်မှ ၃ကြိမ် သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
သင့်ဆရာဝန်မှ လိုအပ်သလို ထိုးပေးပါလိမ့်မည်။
Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Bevitineကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Bevitineကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Bevitine
Bevitineကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Bevitine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Bevitineထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
အခြားသော ဆေး၊ အစားအစာများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏအတိုင်းသောက်ပါက သင့်အတွက် လုံခြုံမှုရှိနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ လိုအပ်မှသာ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး တိုးသောက်ခြင်းမျိုးကို ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်လည်း သတ်မှတ်ထားသော ဆေးပမာဏအတိုင်းသောက်ပါက နို့ရည်ထဲတွင်ပါသော ဆေးပမာဏသည် ကလေးအတွက် အန္တရာယ်မဖြစ်စေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထပ်ပြီး သိလိုသည်များရှိသော် ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် A ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Vitaminn B1 သည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရလေ့မရှိပါ။ သို့သော်ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း (အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း)စသည့်
ပြင်းထန်သောဆိုးကျိုးများကို ခံစားရလျှင် နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ ချက်ချင်းသွားပြရပါမည်။
(ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Bevitine ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။)
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Bevitineက အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Bevitineဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ }
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Vitamin B1 ချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော သွေးအားနည်းခြင်း၊ အရက်သမားများတွင် ဖြစ်သော အာရုံကြောများရောင်ရမ်းခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် Vitamin B အုပ်စုချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော Pellagra ရောဂါစု အတွက်
အသက် ၁၅ – ၅၀ နှစ် အမျိုးသားများ – ၁.၅ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
အသက် ၁၁ – ၅၀ နှစ် အမျိုးသမီးများ – ၁.၁ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
အသက် ၅၁ နှစ် နှင့် အထက် အမျိုးသားများ – ၁.၂ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
အသက် ၅၁ နှစ် နှင့် အထက် အမျိုးသမီးများ – ၁ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ -၁.၅ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
နို့တိုက်မိခင်များ – ၁.၆ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
ကလေးတွေအတွက် Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
မွေးကင်းစမှ ၆ လအထိ – ဝ.၃ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
၆လမှ ၁ နှစ် အထိ- ဝ.၄ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
၁-၃ နှစ် ကလေးများ- ဝ.၇ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
၄-၆ နှစ် ကလေးများ- ဝ.၉ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
၇-၁၀ နှစ် ကလေးများ- ၁ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
၁၁- ၁၄ နှစ် ကလေးများ- ၁.၃ မီလီဂရမ် နေ့စဉ်
Bevitine (ဘီဗစ်တင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Bevitineကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သောက်ဆေး (Film coated): ၂၅၀ မီလီဂရမ်
ထိုးဆေး : ၅၀ မီလီဂရမ် / မီလီ